ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္ကေန စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ျပန္လာခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔အေတာ္ဆုံးဆိုတဲ့ ကေနဒါစႏိုက္ပါသမား..?( ယူကရိန္းမွာ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္စရာပါလို ့ဖြင့္ခ်လာပါၿပီ )
ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်ကနေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ပြန်လာခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ ကနေဒါစနိုက်ပါသမား..?( ယူကရိန်းမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေက တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာပါလို ့ဖွင့်ချလာပါပြီ )
နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာ ချီးကျူးခံခဲ့ရတဲ့ Wali ဆိုတဲ့ ကနေဒါစနိုက်ပါသမားဟာ ယူကရိန်းကနေ Quebec မြို့ (ကနေဒါမြို့) ကို ပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ရာမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတွေကိုသာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူက ယူကရိန်းမှာ လက်နက်မလုံလောက်မှု၊ လေ့ကျင့်မှုညံ့ဖျင်းမှုနဲ့
ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို အမြတ်ထုတ်မှုနဲ့ တပ်ပြေးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူဟာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့ ယူကရိန်းဘက်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးချိန်မှာ အနောက်မီဒီယာတွေက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ်မှာလည်း ကာ့ဒ်စစ်သွေး ကြွကို တိုက်ခိုက်ဖူးတဲ့ ကနေဒါစစ်သားဟောင်းကို ကမ္ဘာ့အထူးချွန်ဆုံးစနိုက်ပါသမားအဖြစ် စပိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး အမေရိကန်မီဒီယာတွေကလည်း
အလွန်အမင်းချီးကျူးရေးသားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ သောကြာနေ့က သူက La Presse နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ- “ယူကရိန်းတပ်မှူးတွေဟာ သူအပါအဝင် နိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် သူ စောင့် ဆိုင်းနေရတာကို ငြီးငွေ့ခဲ့ပြီး Quebec က အခြားစစ်သားဟောင်းတွေကို သူ ဦးဆောင်ကာ ကိုယ်ပိုင်ယူနစ်တခုဖြစ်တဲ့ Norman Brigade မှာ
ပါဝင်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့အတွက် ကတိပေးထားတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ဝတ်စုံတွေ မရရှိခဲ့သလို ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာလည်း အကာအ ကွယ်ပစ္စည်းတွေမပါဘဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တချို့စစ်သားတွေဟာ ဒေါ်လာ ၅
သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှီတဲ့ အမေရိကန်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ လက်နက်တွေကို ခိုးယူခဲ့ကြတဲ့အထိကို ပြု လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း သူက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Wali က ကိယက်ဗ်အနီးက ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တခုန​ဲ့ ထပ်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လက်နက်၊ အစားအသောက်နဲ့ ဓာတ်ဆီတွေကို ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Wali ဟာ ယူကရိန်းကနေထွက်ခွာဖို့ကို ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပြီး
စိတ်အကြီးအကျယ်ပျက်ခဲ့ရတယ်လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပြီး ယူကရိန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အားလုံးသိအောင် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူကရိန်းကလည်း ပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာတော့ သူတဦးတည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။လေ့ကျင့်သားမပြည့်ဝသေးတဲ့လူတွေကို ကျည်အနည်းငယ်ပေးကာ ရှေ့တန်းကို စေလွှတ်နေမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စေတနာ့
ဝန်ထမ်းတွေက ပြောဆိုခဲ့ကြသလို လက်နက်မလုံလောက်တာ၊ အရာရှိတွေရဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တာကိုပါ လူမှုကွန်ယက်အသီးသီးကနေ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိနျးစစျမွပွေငျကနေ စိတျပကြျလကျပကြျနဲ့ ပွနျလာခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့အတောျဆုံးဆိုတဲ့ ကနဒေါစနိုကျပါသမား..?( ယူကရိနျးမှာ ကွုံတှေ့ခဲ့ရတာတှကေ တောျတောျလေး စိတျပကြျစရာပါလို့ဖှငျ့ခလြာပါပွီ )
နိုငျငံတကာမီဒီယာတှမှော ခြီးကြူးခံခဲ့ရတဲ့ Wali ဆိုတဲ့ ကနဒေါစနိုကျပါသမားဟာ ယူကရိနျးကနေ Quebec မွို့ (ကနဒေါမွို့) ကို ပွနျလာခဲ့ပွီဖွစျပါတယျ။သူ့ရဲ့ အတှေ့အကွုံတှကေို ဒသေတှငျးမီဒီယာတှကေို ပွောဆိုခဲ့ရာမှာ စိတျပကြျဖှယျရာတှကေိုသာ ရငျဆိုငျခဲ့ရတယျလို့ ဖှငျ့ဟခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ သူက ယူကရိနျးမှာ လကျနကျမလုံလောကျမှု၊ လေ့ကငြ့ျမှုညံ့ဖငြျးမှုနဲ့
ကွီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတှရှေိနတေယျလို့ ဆိုခဲ့သလို အမွတျထုတျမှုနဲ့ တပျပွေးမှုတှလေညျးရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။သူဟာ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖွစျနဲ့ ယူကရိနျးဘကျက ဝငျရောကျတိုကျခိုကျပေးခြိနျမှာ အနောကျမီဒီယာတှကေ ရေးသားဖောျပွခဲ့ကွတာဖွစျပါတယျ။ အီရတျမှာလညျး ကာ့ဒျစစျသှေး ကွှကို တိုကျခိုကျဖူးတဲ့ ကနဒေါစစျသားဟောငျးကို ကမ်ဘာ့အထူးခြှနျဆုံးစနိုကျပါသမားအဖွစျ စပိနျမီဒီယာတှကေ ဖောျပွခဲ့ကွပွီး အမရေိကနျမီဒီယာတှကေလညျး
အလှနျအမငျးခြီးကြူးရေးသားခဲ့ကွဖူးပါတယျ။ သောကွာနေ့က သူက La Presse နဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူးမှာ- “ယူကရိနျးတပျမှူးတှဟော သူအပါအဝငျ နိုငျငံခွားတိုကျခိုကျရေးသမားတှနေဲ့ ဘာလုပျရမှနျးမသိဖွစျနတေယျ” လို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။တိုကျပှဲဝငျဖို့အတှကျ သူ စောငျ့ ဆိုငျးနရေတာကို ငွီးငှေ့ခဲ့ပွီး Quebec က အခွားစစျသားဟောငျးတှကေို သူ ဦးဆောငျကာ ကိုယျပိုငျယူနစျတခုဖွစျတဲ့ Norman Brigade မှာ
ပါဝငျခဲ့ရတယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့အတှကျ ကတိပေးထားတဲ့ လကျနကျတှနေဲ့ ဝတျစုံတှေ မရရှိခဲ့သလို ရှေ့တနျးစစျမကြျနှာမှာလညျး အကာအ ကှယျပစ်စညျးတှမေပါဘဲ တိုကျခိုကျခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။တခြို့စစျသားတှဟော ဒေါျလာ ၅
သိနျးကြောျတနျဖိုးရှီတဲ့ အမရေိကနျထောကျပံ့ပေးတဲ့ လကျနကျတှကေို ခိုးယူခဲ့ကွတဲ့အထိကို ပွု လုပျခဲ့ကွတယျလို့လညျး သူက ထုတျဖောျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ Wali က ကိယကျဗျအနီးက ယူကရိနျးတပျဖှဲ့တခုနဲ့ ထပျပူးပေါငျးခဲ့ပွီး လကျနကျ၊ အစားအသောကျနဲ့ ဓာတျဆီတှကေို ရှာဖှနေရေတယျလို့လညျး သူ့ရဲ့ပွောဆိုခကြျမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။နောကျဆုံးမှာတော့ Wali ဟာ ယူကရိနျးကနထှေကျခှာဖို့ကို ဆုံး ဖွတျခဲ့ပွီး
စိတျအကွီးအကယြျပကြျခဲ့ရတယျလို့ ဖှငျ့ဟခဲ့ပွီး ယူကရိနျးမှာဖွစျပကြျနတောတှကေို အားလုံးသိအောငျ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ယူကရိနျးကလညျး ပွနျလညျထှကျခှာလာတဲ့ စတေနာ့ဝနျထမျးတှထေဲမှာတော့ သူတဦးတညျးမဟုတျဘဲ အခွားသူတှလေညျး ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။လေ့ကငြ့ျသားမပွညျ့ဝသေးတဲ့လူတှကေို ကညြျအနညျးငယျပေးကာ ရှေ့တနျးကို စလှှေတျနမှေုတှလေညျးရှိနတေယျလို့စတေနာ့
ဝနျထမျးတှကေ ပွောဆိုခဲ့ကွသလို လကျနကျမလုံလောကျတာ၊ အရာရှိတှရေဲ့ မိုကျရူးရဲဆနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကြျတှရှေိနခေဲ့တာကိုပါ လူမှုကှနျယကျအသီးသီးကနေ ထုတျဖောျပွောဆိုမှုတှလေညျး ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
Previous Article တောင်အာဖရိကမှာ ဆင်ချေးတုံးကနေ ဒာရက်ချက်လုပ်ရောင်း – hotnewmyanmar.com
Next Article ထူးခြားသော အပြာရောင်မျက်လုံးအသွင်အပြင်ကြောင့် နာမည်ကြီးလာသော မိန်းကလေး